ကင်ဆာလို့ စစ်ဆေးသိရှိပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ - Hello Sayarwon
ကင်ဆာလို့ စစ်ဆေးသိရှိပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။
ကင်ဆာ . . . အခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲတာတဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေက တော်တော်လေး များလာပါတယ်။ ကင်ဆာဆိုတာကလည်း ဖြစ်ကတည်းက သိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သော ကင်ဆာတွေဆိုရင် ရောဂါက တော်တော်လေး အဆင့်ရောက်လာမှ လက္ခဏာတွေ စပြတာမျိုးပါ။ လူတော်တော်များများ အခုထိ လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆ တစ်ရပ်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကင်ဆာ ဖြစ်ပြီဆိုရင် သေမိန့်ကျသွားတယ်လို့ ယူဆကြတာပါ။
ဒီလို ယူဆမှုကြောင့်ပဲ ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ကုထုံးတွေ ထိရောက်မှု အားနည်းလာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်မတိုင်ခင်မှာ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးတာတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။
ဒီတော့ ရှောင်လွှဲမရတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင် စိတ်ဖိစီးစရာတွေ စိုးထိတ်စရာတွေ များမယ်ဆိုပေမယ့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ လွယ်ကူစွာနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ဘာတွေကိုများ လိုက်နာဖို့ လိုမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆိုတာက ခက်ခဲတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ပါ
ကင်ဆာဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်ဆာလို့ သိရှိလိုက်ချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရသူ ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုဝင်တွေပါ စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာ၊ ကြောက်လန့်တာ၊ စိတ်မကောင်းတာ စတဲ့ စိတ်အားငယ်မှု အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။
ကင်ဆာဆိုတာကလည်း မကြောက်လို့ မရတဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကိုး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပြောပြချင်တာက ကင်ဆာက စောစောသိ စောစောကုသနိုင်ရင် ရှင်သန်နိုင်ခြေများတယ်ဆိုတာပါ။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာ ရှိနေပြီလို့ သိရတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ကင်ဆာလို့ စစ်ဆေး သိရှိရပြီဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ဒီမေးခွန်းလေးတွေ မေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကင်ဆာ အမျိုးအစားက ဘာလဲ။
ကင်ဆာ စဖြစ်တဲ့နေရာက ဘယ်နေရာလဲ။
ကုသရင် ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်နိုင်ခြေ ရှိမလဲ။
အခြား ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုဦးမလဲ။
ကုသမှု ခံယူနေစဉ် အတွင်း ဘယ်လိုတွေ ခံစားရနိုင်လဲ။ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမလဲ။
ကုသမှုရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဘာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ။
ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြရမလဲ။
ကင်ဆာ ကုသ အောင်မြင်ခဲ့ရင်ရော ထပ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ။
ကင်ဆာလို့ သိရပြီဆိုရင် ဖြစ်နေတဲ့ ကင်ဆာ အမျိုးအစားကစလို့ ကုထုံးနဲ့ လိုက်နာရမယ့် နေထိုင်စားသောက်မှုတွေအထိ သေသေချာချာ သိရှိနိုင်စေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်က အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့သလို ဘယ်ကုထုံးက အဆင်ပြေမလဲ။ ဘယ်လောက်ထိရောက်မှု ရှိနိုင်လဲဆိုတာတွေကိုပါ သေချာလေး မေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အခြေအနေက လူတိုင်းကို စိတ်ထိခိုက်စေနိုင်တာ မှန်ပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေကို သေချာလေးတော့ ပြောပြထားဖို့ လိုပါမယ်။ အားလုံးကို မဟုတ်ရင်တောင် အရင်းနှီးဆုံး မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကိုတော့ ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဒါမှလည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ရနိုင်မှာပေါ့။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲလာနိုင်ခြေတွေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
ကင်ဆာလို့ သိပြီ။ အမျိုးအစားလည်း သိပြီဆိုရင် ကုသမှု မခံယူခင်မှာ နောက်ပိုင်းမှာ ကင်ဆာကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမလဲဆိုတာတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ သေချာလေး မေးမြန်းဖို့ လိုပါမယ်။
ကုထုံးကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးတွေကြောင့် ဆံပင်တွေ ကျွတ်နိုင်လား၊ အသားအရေတွေ ပြောင်းလဲလာမလား။ ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ သေချာလေး တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ်ခံအားကလည်း နည်းလာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျန်းမာနေစေဖို့ဆိုရင် ကင်ဆာ ကုထုံး ခံယူနေချိန်မှာ ကုထုံးကို သက်ရောက်မှု ကောင်းစေမယ့် အစားအစာတွေကို စားပေးဖို့ လိုသလို အာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင် စားပေးဖို့လည်း လိုပါမယ်။
အသား၊ငါး၊ အသီးအရွက်တွေကို ပြည့်ဝအောင် စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ မွေးမြူပါ။
နေ့စဉ် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ၊ သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပေးတာကလည်း ကင်ဆာ ခံစားနေရသူတွေကို ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှည်စေဖို့လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာ ခံစားနေရချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့တာကလည်း ကုထုံး ထိရောက်ဖို့ရော နေ့စဉ်မှာ ကျန်းမာနေစေဖို့ပါ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောဂလေ့ကျင့်တာ၊ တရားထိုင်တာလိုမျိုး စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကင်ဆာ ခံစားနေရသူက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရောဂါခံစားနေရသူတွေ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဆွေးနွေးမှု စကားဝိုင်းတွေမှာပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးတာ၊ အတွေ့အကြုံဖလှယ်တာမျိုးတွေ လုပ်ပေးပါ။
Cancer diagnosis: 11 tips for coping https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/in-depth/cancer-diagnosis/art-20044544 Accessed Date 20 December 2021
Coping withacancer diagnosis https://www.cancer.org.au/cancer-information/after-a-diagnosis/coping-with-a-cancer-diagnosis Accessed Date 20 December 2021
How can you cope withacancer diagnosis? https://www.medicalnewstoday.com/articles/319749 Accessed Date 20 December 2021
ကင်ဆာကို ဘယ်လို အဆင့် သတ်မှတ်ကြသလဲ။
ကင်ဆာရောဂါတွေ ကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေဖို့
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်သလား။
ကင်ဆာရောဂါ တွေကို ဘယ်လိုကုသနိုင်သလဲ။